Samy manam-bola daholo | NewsMada
Samy manam-bola daholo
Mihazakazaka, tsy araka ny aina intsony ny fizotran’ny fiainam-pirenena. Tsy afa-misaraka amin’izany koa anefa ny fidangan’ny vidim-piainana, mila hanapitra ny fofonain’ny vahoaka iray manontolo. Manoloana izany anefa, misy fotoana tsara fitontona ity, mety hanala izao vesatra mahazo ny ambanilanitra izao, eny fa na fotoana fohy ihany aza.
Ny fisian’ny fifidianana ho filoham-pirenena, afaka roa volana latsaka, ny tian-kambara. Fanomezana tsy latsaka avy any an-danitra akory fa tolotra avy amin’ireo kandidà. Azo antoka fa tsy maintsy hisy ny fanipitsipazana vola sy akanjo ary sakafo sy fanambatambazana isan-karazany avy amin’izy ireo, homena ny vahoaka mpifidy.
Samy manam-bola daholo ireo. Mamorona ny tsy misy satria hilaozan’ny olona eo izay tsy manan-katolotra. Ny vahoaka rahateo, efa feno hafetsena amin’izao fotoana izao fa tsy hatao tohatra fiakarana toy ny taloha ka hovokisana fampanantenana poakaty lava izao. Tsy miaraka amin’ny kandidà be kabary fotsiny izany izy fa izay be “sôsy” ihany. “Tsy mitaingina soavaly betongotra sy tsy afaka ê”.
Efa manomboka mandondom-baravarana any amin’ny isan-tokantrano izy ireo, ankehitriny, na tsy mbola manomboka aza ny fampielezan-kevitra. Mitondra teny mamy feno fampanantenana, miaraka amin’ny valopy (vola). Tsy maintsy izay ny paikady, raha tsy izany, tsy handany andro hihaino izay kabarinao izany ny olona efa tofoka mpanao politika be fikafika. Ny vola ihany izao no mahamaika azy ireo.
Aleon’ny vahoaka tsimandadiharona very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola, raha amin’izao andro iainana izao. Ny vola mantsy, hono, hozatry ny fiainana. Tsy hitan’ny olona izay lalim-paosy sy kely fanolotra. Samy manam-bola daholo ireo fa ny isany no tsy mitovy.